‘सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्छ’ - अन्तर्वार्ता - नारी
‘सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्छ’
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिइरहेको छ । भाइरस संक्रमणबाट बँच्न नेपाल सरकारले लकडाउन गरेसँगै शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । विद्यालय, कलेज बन्द छन् । एसईईदेखि विश्वविद्यालयस्तरका सबै परीक्षा स्थगित भएका छन् । विद्यार्थी घरभित्रै बस्न बाध्य छन् । यो स्थितिमा विद्यार्थीलाई कसरी सिर्जनशील बनाउन बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग प्रकृति दाहालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
अहिले शैक्षिक क्षेत्रसँगै विश्व नै अस्तव्यस्त जस्तो देखिन्छ । तर नेपालमा शैक्षिक सत्र परिवर्तनको बेला भएकाले तुलनात्मक रुपमा कम असर परेको भन्न सकिन्छ । तै पनि विद्यार्थी एवम् अभिभावकमा स्वभाविक मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ । कतिपय परीक्षा स्थगित भएका छन् । परीक्षा स्थगित भएका विद्यार्थीका लागि यो पढ्ने र तयारी गर्ने समय हो । तर उनीहरुले राम्रोसित पढ्न सकिरहेका छैनन् । यसप्रति सरकार र अभिभावक पनि जिम्मेवार देखिदैनन् । घरमै पढ्ने, सिक्ने र परीक्षाको तयारी गर्ने वातावरण बनाउने मामलामा सरकार चुकेको छ ।
पढाउन त अफ्ठेरो भयो होला । घरमै सिर्जनशील बनाउने उपाय चाहिँ के हुन सक्छ ?
पुस २३, २०७६ - कार्निसको प्रयोग